Banky SG Madagasikara: tolotra Soafeno manokana miisa efatra | NewsMada
Banky SG Madagasikara: tolotra Soafeno manokana miisa efatra
Niantraika mafy tamin’ny sehatra maro ny krizy Covid-19. Manoloana izany, mitsinjo ny mpanjifa ny banky Société générale (SG) Madagasikara, manome tolotra manokana, hanamorana ny fandrindrana sy ny fandaminana ara-bola isan-tokantrano. Miisa efatra ny tolotra fampindramam-bola Soafeno, arakaraka ny filan’ny mpanjifa. Ny Soafeno Maika, vahaolana amin’ny tranga tsy ampoizina na ilana vola maika. Ny Soafeno Express, hiantohana ny fianaran’ny ankizy, na hikarakarana fankalazana miavaka, na hividianana entana isan-karazany. Ny Soafeno Auto, hividianana fiara vaovao na efa niasa. Ary farany ny Soafeno Moto, hividianana moto.
Miavaka ireo tolotra Soafeno ireo, satria ambany ny tahan’ny zanabola, mivaly sy mivoaka ao anatin’ny 24 ora. Maimaim-poana ny saran’ny fitambaran’ny tolotra (pack) mandritra ny telo volana. Haharitra hatramin’ny faran’ny volana novambra 2020 ity hetsika manokana ity.
Mampiavaka azy koa, mandray anjara avy hatrany amin’ny “Tombola Soafeno” ireo rehetra manjifa ny tolotra Soafeno, nanomboka ny 14 septambra hatramin’ny 7 novambra 2020. Anisan’ny loka ho azo amin’izany ny televiziona “écran plat” lehibe (43’’) miisa dimy sy moto 125 cc miisa roa. Isaky ny roa herinandro ny fisarihana.